Voalaza Fa Miroso Miaraka Amin’ilay Fantsona Naha-be Resaka i Meksika Na Nisy Aza Fanakanana · Global Voices teny Malagasy
Voalaza Fa Miroso Miaraka Amin'ilay Fantsona Naha-be Resaka i Meksika Na Nisy Aza Fanakanana
Voadika ny 01 Janoary 2017 8:45 GMT
Vakio amin'ny teny bahasa Indonesia, Español, 日本語, English
Foko Yaqui eo am-pivoriana. Sary : mpampiasa Flickr Malova Gobernador. Nampiasaina eo ambany fahazoandàlana CC 2.0.
Lasa adihevitra lehibe mahakasika ny vondrom-piarahamonin'ny teratany Yaqui ao an-toerana, izay tsy dia faly momba ny làlan'ny fantsona Aqua Prieta (manitsy mamakivaky ny faritanin'i Yaqui) ilay fantsona vaovao iray mbola eo an-dàlam-panamboarana any amin'ny faritra avaratr'i Meksika.
Niharatsy ny toe-javatra tamin'ny 21 Oktobra, rehefa nanafika andiana mpanao hetsi-panoherana, namono iray tamin'ireo, nandratrà olona valo ary niteraka fanimbam-pananana vitsivitsy ireo mpankasitraka ilay fantsona.
Ny foko Yaqui, izay niaritra tantaram-pamoretana naharitra ela, dia manana ihany koa tantara iray amin'ny fametrahana hetsika fanoherana isan-karazany. Toy ireo vondrom-piarahamonina teratany hafa ao Meksika, namoy ny ainy niady nanohitra ireo orinasa tsy miankina sy manampahefana tsy teratany ireo mpikambana ao amin'ny foko Yaqui. Vao roa taona lasa izay, talohan'ny ady momba ny fantsona Agua Prieta, nanohitra ilay lakan-drano goavana izay mety hamily izay sisa tavela amin'ny renirano masina ho any amin'ny tanànan'i Hermosillo ny Yaquis.
Arakaraka ny namolavolana azy, hanomboka any Arizona, any Etazonia ny tetikasa fantsona Aqua Prieta, ary hifarana ao Sonora, Meksika. Haorina amin'ny 90 kilometatra ao amin'ny faritanin'i Yaqui ny ampahany iray amin'ny fantsona izay arovan'ny lalàna Meksikàna, Ny fanorenana ny lakandrano tsy nanaovana fakàna hevitra notsaraina ho rariny, mangarahara, ary nifandrimbonana ho an'ny vondrom-piarahamonina rehetra dia mety ho fanitsakitsahana ny fiandrianan'ny tanin'ny Yaqui, hoy ireo mpitarika ny vondrom-piarahamonina.
Vao haingana, nahazo fampiatoana vonjimaika ny fanorenana ny fantsona ireo mpikambana ao amin'ny foko Yaqui. Araka ny haino aman-jery ao an-toerana, anefa, nanambara ireo manampahefana Meksikana fa hitohy ny fanorenana ilay fantsona satria “vondrom-piarahamonina iray” tsy afaka hanakana “tetikasa izay hitondra tombontsoa ho an'ny taranaka hoavy”.
Araka ny pejy Facebook-n'ny Solidaridad Tribu Yaqui, mitohy ny fanorenana, na tsy nisy mihitsy aza fandihadiana tsy mitanila sy mangarahara ary fifampiraharahana:
Amin'ny lafiny iray, manohitra ilay fantsona ny Yaquis ao Loma de Bácum ary nameno fitoriana ara-dalàna manohitra ny asa. Hatramin'izao, notohizina ihany ny tetikasa teo ambany fanarahamason'ny SENER (Sekreterian'ny Angovo). Ireo, niaraka tamin'ny orinasa Sempra Energy, ny governemantan'ny Hermosillo, ny haino aman-jery ao an-toerana, ary ny governemanta monisipaly (izy rehetra ireo samy nanohana ny asa) dia nitady ny fomba rehetra mba handemena ny fanoheran'ny Loma Bácum.
Ny mpandray anjara hafa hita maso amin'io ady io, tohanan'ireo mpankasitraka ny tetikasa, dia Yaquis avy aminà tanàna 7 hafa, ao anatin'ny tranga somary mahagaga, dia efa lasa tafondron'ny herisetra sy ny fampitahorana mba hitsofohan'ny fantson'ny entona hiditra ny faritanin'i Bácum.”
Naneho ny ahiahiny momba ny fanavakavahana sy ny fanilikilihana koa ny Solidaridad Tribu Yaqui:
“Tsy miraharaha fiainan'ny olona iray, roa, na telo izany ireo lehilahy mpanankarena ireo, mainka moa fa teratany izy ireo. Izy ireo ilay tsy miraharaha raha mianjera ny governemanta teratany. Izy ireo ilay tsy miraharaha raha foana ny kolontsaina Yaqui. Ny tena zava-dehibe amin'ireo lehilahy manankarena dia ny hamarana ny asa ary handray ny tombontsoa, hanamafisana ny fakàna ny Tanin'ny Yaqui”.
Gema Villela Valenzuela, Meksikana iray mpanao gazety izay nanao fanadihadiana momba ny fijery ny maha-lahy sy maha-vavy, nanoratra momba ireo fandrahonana atrehin'ny vehivavy Yaqui avy any Loma de Bacun, hatramin'ny nivoahan'izy ireo hanohitra ny fantsona Agua Prieta:
Nitatitra ireo vehivavy avy amin'ny vondrom-piarahamonina Yaqui (izay nangataka tsy ho tononina anarana mba ho fiarovana azy) hoe ny fanorenana ny fantsona, nataon'i Gasoducto Aguaprieta, dia niteraka herisetra niafara tamin'ny fifandonana teo amin'ny mpikambana ao anatin'ilay vondrom-piarahamonina, ny fandrahonana ireo mpitarika ny Yaquis sy ireo vehivavy avy amin'io foko io ihany, ary ireo mpiaro ny zon'olombelona, ireo teratany sy mafana fo mpiaro ny tontolo iainana. Nanazava izy ireo fa, vokatry ny fifandirana, nirehitra ny fiara, ary nisy aza ady iray nahafatesana lehilahy iray. Tsy maintsy nijanona taminà toerana iray heveriny ho azo antoka ireo vehivavy sasany ao amin'ilay vondrom-piarahamonina, satria izay no nangatahan'ireo manampahefana Yaquis ao amin'ny tanàn'i Bácum. Nahazo fandrahonana izy ireo satria nanohitra ny fanaovana sonia ny fahazoandàlana iraisana ho an'ny fanorenana ilay fantsona.
Araka ny mpanao gazety, Al-Dabi Olvera, nameno fitarainana niaraka tamin'ny Vaomiera Meksikana momba ny Zon'olombelona sy ny Fitsarana Anatin'i Amerika momba ny Zon'olombelona ireo mpikambana ao amin'ny vondrom-piarahamonina Yaqui ao Al-Dabi Olvera. Tamin'ny volana lasa, notaterin'i Gema Valenzuela fa mbola nahazo fandrahonana hatrany noho ny fanoherana ilay fantsona ireo mpikambana ao amin'ny fiarahamonina Yaqui.